Tari-dalana Toriteny Alahady 05 Martsa 2017 (Alahady faha-6 mialoha ny PASKA) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Tari-dalana Toriteny Alahady 05 Martsa 2017 (Alahady faha-6 mialoha ny PASKA)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika. Indro ary atolotra anareo indray ny tari-dalana momba ny texte izay ho toriana manerana ny sahan’ny FLM amin’ny Alahady faha-05 Marsa 2017 ho avy izao (Alahady faha VI mialoha ny Paska)
TEXTE: MATIO 16:21-23
Ny fahalalan’ireo olona ivelan’ny mpianatr’i Jesosy ny “Zanak’Olona” sy ny fahalalan’izy ireo, izay nosoloin’i Petera tena Azy ho ny “ny Kristy Zanak’Andriamanitra velona” no perikopa izay mialoha ity texte izay anjarantsika ity (Mat. 16:13–20). Ao anatin’io texte io dia mahita titre Kristolojika telo isika: Zanak’Olona, Kristy, Zanak’Andriamanitra, ary izao no tian’i Matio hampitaina amin’izany: “ny Kristy dia sady Olona tokoa no Andriamanitra tokoa”. Eto dia ny mpianatr’i Jesosy no nanana izany fahalalana tao anatin’ny finoana ny mahaizy Azy feno an’i Jesosy izany. Tsy ny mahaizy Azy feno an’i Jesosy ihany no fonosin’izany fa ny asa izay tanterahan’Andriamanitra ao Aminy koa: ny fihaonan’Andriamanitra sy ny olombelona na ny fihavanan’Andriamanitra sy ny olombelona Jesosy Kristy (ampit. Efes 2:14snm). Nambaran’i Jesosy fa ny fanambaran’Andriamanitra Ray (ἀπεκάλυψέν, aorist indicative active 3per. sing of the verb ἀποκαλύπτω, to uncover, to reveal) no fototr’izany fahalalana feno teo amin’izy ireo izany.
Ny texte izay anjarantsika kosa dia manomboka amin’ny fanambaran’i Jesosy ny asany amin’izany maha Kristy Azy izany ka hahatanterahany izany fampihavanana izany eo amin’ny hazofijaliana (ny fijaliany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany amin’ny maty, and. 21). Tsy azon’i Petera izay nisolo-tena ny mpianatra rehetra anefa izany. Teo ambony dia nantsoin’i Petera hoe “Zanak’Andriamanitra VELONA” Jesosy kanefa rehefa nambarany fa hijaly sy hovonoina ary HITSANGANA AMIN’I MATY Izy dia ny hoe “sanatria Aminao izany” no nitsenany izany. Ny fahalalan’i Petera an’i Jesosy ho “ny Kristy Zanak’Andriamanitra velona” dia vokatry ny fanambaran’Andriamanitra feno sy tanteraka izany taminy. Eto kosa, ny tsy fahalalan’i Petera ny hevitry ny asan’i Jesosy amin’izany maha Kristy sady Olombelona tokoa no Andriamanitra tokoa Azy izany dia noho ny tsy fanomezany toerana an’Andriamanitra hanambara izany taminy fa noho ny fiezahany hanakatra izany amin’ny fisainana maha olombelona ao ambany fitarihan’ny Satana azy kosa.
Lesona ho antsika: Ny hazofijaliana (ny fijalian’i Jesosy sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin’ny maty) no banjinintsika amin’izao. Ny mahalala ny hevitr’izany ho an’ny tenany, i.e., ny mandray ny vokatr’izany ho an’ny tenany dia izay manome toerana an’Andriamanitra irery hanambara izany feno aminy amin’ny alalan’ny Fanahiny.
Ny and. 13 snm dia ahitantsika fa “ny Mpianatr’i” Jesosy no niresahany. Ny and. 24 koa dia izay mahaizy azy “ny Mpanaraka” Azy no ambarany: izay manda ny tenany sy mitondra ny hazofijaliany (mitovy ny hevitry ny hoe “Mpianatra” sy “Mpanaraka” an’i Jesosy). Ao amin’io and. 24 io, ny teny fototra hoe θέλει ὀπίσω no nadikan’ny Baiboly Malagasy hoe “te-hanaraka”. Synonym-n’ny ἀκολουθεω (to follow, manaraka) ao amin’io andininy io ihany izany. Io teny fototra ὀπίσω io dia efa nampiasain’i Jesosy koa nilazany ny ao ivohony raha niteny mafy an’i Petera Izy (and. 23). Inona no tiana hambara amin’izany rehetra izany? Moa ve nataon’i Jesosy hiray toerana ao ivohony ny Mpanaraka azy sy Satana? Azo antoka fa tsy izany no nataon’i Jesosy eto. Tsy fitenenana mafy an’i Satana izay nanolo-tsaina an’i Petera ihany ny tenin’i Jesosy mafy hoe “mankanesa ato ivohoko (ὀπίσω) ianao ry Satana” fa famerenana an’i Petera amin’ny toerana maha Mpanaraka na maha Mpianany azy koa. Tsy toerana ho an’i Satana ny ao ivohon’i Jesosy fa ho an’ny Mpanaraka Azy kosa, i.e., tsy fampifangaroany ny Mpanaraka Azy sy Satana akory ny tenin’i Jesosy tamin’i Petera eto fa famerenana azy amin’ny toerana maha Mpanaraka na maha Mpianany azy kosa: Satana noresen’i Jesosy tamin’ny teny mafy noho ny fikasany hisakana ny fahatanterahan’ny asam-pamonjena, fa Petera kosa naveriny amin’ny toerana maha Mpanaraka na maha Mpianany azy.
Lesona ho antsika: (1) Izay misalovana an’i Jesosy amin’ny asany dia maka ny toeran’ny Satana. (2) Ny fahefana izay omen’i Jesosy ny Mpanaraka Azy (ampit. and. 19) dia ampiasainy amin’ny maha Mpanaraka an’i Jesosy azy. (3) Jesosy irery ihany no afaka mamerina izay rehetra misalovana na manafoana an’Andriamanitra eo amin’ny fiainany sy ny asany amin’ny toerana izay tena tandrify azy dia ny maha Mpanaraka an’i Jesosy azy. Araka ny and. 24 dia ny firaisan’ny mino amin’ny hazofijalian’i Jesosy hatrany (ampit. and. 21) no mamerina azy amin’izany tena toerana tandrify ho azy izany.
Isaorana anie Ilay miasa amin’ny zavatra rehetra ka mampitoetra antsika amin’izay mahaizy azy antsika araka ny fikendren’Izy tompon’ny asa. Voninahitra ho Azy mandrakizay. Amena!
**** Te Hamaky Baiboly? TSINDRIO ETO
Tari-dalana Toriteny Alahady 19 Febroary 2017 (Alahady faha-8 mialoha ny PASKA)
Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Alahady faha VIII mialoha ny Paska ny Alahady faha 19 Febroary 2017 ho avy ...Hanohy hamaky
Tari-dalana Toriteny Alahady 26 jona 2016 (Alahady faha-5 manaraka ny Alahadin'ny Trinité)
Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny tari-dalana momba ny texte izay ho toriana manerana ny FLM amin'ny Alahady faha 26 ...Hanohy hamaky